ရိုမာရီယို - ဝီကီပီးဒီးယား
ရိုမာရီယူ ဒီ စောဇဲ ဖားရိယာ
၂၀၁၅တွင် အထက်လွှတ်တော်အမတ်အဖြစ် တွေ့ရပုံ
၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁
၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ – ၂၀၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၁
(1966-01-29) ၂၉ ဇန်နဝါရီ၊ ၁၉၆၆ (အသက် ၅၆)
Mônica Santoro (1988–1995),
Danielle Favatto (1996–2001),
Isabelle Bittencourt (2010–2012)
CR Vasco da Gama ၄၇ (၁၇)
PSV Eindhoven ၁၀၉ (၉၈)
FC Barcelona ၄၆ (၃၄)
Clube de Regatas do Flamengo ၁၉ (၈)
Valencia CF ၁၁ (၅)
→ Clube de Regatas do Flamengo (အငှား) ၄ (၃)
Clube de Regatas do Flamengo ၃၉ (၂၆)
CR Vasco da Gama ၄၆ (၄၁)
Fluminense FC ၆၀ (၃၄)
→ Al Sadd SC (အငှား) ၃ (၀)
CR Vasco da Gama ၃၁ (၂၂)
Miami FC ၂၅ (၁၉)
→ Adelaide United FC (အငှား) ၄ (၁)
CR Vasco da Gama ၅ (၃)
America Football Club (Rio de Janeiro) ၀ (၀)
ဘရာဇီး ယူ(၂၀) ၁၁ (၁၁)
ဘရာဇီး ယူ(၂၃) ၁၁ (၁၅)
ဘရာဇီး အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်း ၇၀ (၅၅)
ဘရာဇီး အတွက် ယှဉ်ပြိုင်
အနိုင်ရသူ 1994 FIFA World Cup
အနိုင်ရသူ 1997 FIFA Confederations Cup
အနိုင်ရသူ 1989 Copa América
အနိုင်ရသူ 1997 Copa América
Runner-up 1988 Summer Olympics Team
အနိုင်ရသူ 1985 South American U-20 Championship
ရိုမာရီယို အဖြစ် လူသိများသော ရိုမာရီယူ ဒီ စောဇဲ ဖားရိယာ[မှတ်စု ၁] (ပေါ်တူဂီ: Romário de Souza Faria ; ၁၉၆၆ ဇန်နဝါရီ ၂၉ မွေးဖွား ) သည် ဘရာဇီးနိုင်ငံရေးသမားတစ်ဦးဖြစ်ကာ ကမ္ဘာ့တွင် ကျော်ကြားခဲ့သော ဘောလုံးသမားဟောင်း တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ တိုက်စစ်မှူးအဖြစ် စွမ်းရည်ရှိသော အဆုံးသတ်များကြောင့် သမိုင်းတစ်လျှောက် အကြီးကျယ်ဆုံးကစားသမားများထဲက တစ်ဦးအဖြစ် သတ်မှတ်ယူဆကြသည်။ ရိုမာရီယိုသည် ဘရာဇီး အမျိုးသား ဘောလုံးအသင်းအတွက် ၁၉၉၄ ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတွင် ပနိုင်ရရှိစေရန် ကစားပေးခဲ့ပြီး (ဖီဖာ)ရွှေဘောလုံးဆု ရရှိခဲ့သည်။ ထိုနှစ်၏ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုရှင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရ၏ ။ ၁၉၉၉ အင်တာနက်မဲကောက်ယူမှုတွင် ရာစုနှစ်၏ ဖီဖာကစားသမားအဆင့် (၅)တွင် ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ကာ ၂၀၀၂၌ ဖီဖာ ကမ္ဘာ့ဖလား အိပ်မက်အသင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄၌ ကမ္ဘာ့အကြီးကျယ်ဆုံး သက်ရှိထင်ရှား ဖီဖာ (၁၀၀) တွင်လည်း ရွေးချယ်ခံရပြန်သည်။
ကလပ်အသင်းအနေဖြင့် ဘရာဇီးတွင် အစောပိုင်း ကစားသမားဘဝကို ဖြတ်သန်းပြီးနောက် နယ်သာလန်ကလပ် ပီအက်စ်ဗီသို့ ၁၉၈၈တွင် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့၏ ။ ယင်း၌ ကစားခဲ့သော (၅)ရာသီအတွင်း ပီအက်စ်ဗီသည် 'အေးရဒီဗီဇီး' (နယိသာလန်ပြည်တွင်း လိဂ်) ချန်ပီယံ သုံးကြိမ် ဖြစ်လာခဲ့ကာ ၁၆၇ ပွဲတွင် ၁၆၅ ဂိုးသွင်းယူခဲ့သည်။ ၁၉၉၃တွင် ဘာစီလိုနာ ဘောလုံးအသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ယိုဟန်း ခရက်ဖ်၏ စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်အသင်း၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လာခဲ့ကာ ဟဲရစ်တိုး စတိုးယစ်ချ်ခို့ဖ် (Hristo Stoichkov) နှင့် အလွန်တရာကောင်းမွန်သော တိုက်စစ်အတွဲဖြစ်လာခဲ့သည်။ လာ လီဂါ ဖလားကို ပထမရာသီတွင်ပင် ရရှိခဲ့ပြီး ထိပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင် (၃၃)ပွဲ၌ ဂိုး (၃၀) ဖြင့်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ကစားသမားဘဝ ဒုတိယသက်တမ်းကို ဘရာဇီးနိြင်ငံ ရီယိုဒီဂျနေးရိုးမြို့ ရှိ ကလပ်အသင်းများတွင် ကစားခဲ့သည်။ ဘရာဇီးလိဂ် ဖလားကို ၂၀၀၀တွင် CR Vasco da Gama အသင်းနှင့် ရယူနိုင်ခဲ့၍ ယင်းလိဂ်၌ ဂိုးအများဆုံးသွင်းသူဆု သုံးကြိမ်ရရှိခဲ့ပေသည်။ ကစားသမားသက်တမ်း အဆုံးသတ်ကို ကာတာ၊ အမေရိကနှင့် ဩစတေးလျတို့၌ ခဏတဖြုတ်ကစားခဲ့၏ ။
ပင်နယ်တီဧရိယာအတွင်း ဆရာတစ်ဆူအဖြစ် ယူဆကြကာ ၎င်း၏ တာတို မြန်နှုန်းသည် ခံစစ်မှူးများကို ရှောင်ကွင်းနိုင်၍ 'ခြေထိပ်တည့်တည့်ဖြင့်' အဆုံးသတ် ဂိုးသွင်းခြင်းမှာ ၎င်း၏ ကျော်ကြားလှသော အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘရာဇီး အမျိုးသားအသင်းအတွက် ပွဲပေါင်း (၇၀)တွင် (၅၅)ဂိုးသွင်းယူမှုနှင့်အတူ အသင်း၏ ထိပ်တန်းဂိုးသွင်ရှင်စာရင်းတွင် စတုတ္ထမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ လက်ရှိအချိန်ထိ ထပ်တန်းဂိုးသွင်းရှင် သုံးဦးမှာ ပီလီ၊ ရော်နယ်လ်ဒို၊ နေမာ တို့ဖြစ်သည်။ ဘရာဇီးလိဂ်တွင် (၁၅၄)ဂိုးသွင်းယူခဲ့သောကြောင့် ဒုတိယ ဂိုးအများဆုံး သွင်းယူသူဖြစ်သလို ဘောလုံးသမိုင်း၌ ဒုတိယမြောက် ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူသူလည်းဖြစ်သည်။
↑ ရိုမာရီယို စာလုံးမှ 'ရ' သံသည် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ 'r' (ရ) သံစစ်စစ်မဟုတ်ပါ၊ 'ရ' နှင့် 'ဟ' ကြားသံဖြစ်၏ ။
↑ "The Joy of Six: Great finishers". The Guardian. Retrieved 19 November 2013
↑ "Romario: Neymar isn't as good as me … yet" Archived2February 2014 at the Wayback Machine.. MSN. Retrieved 19 November 2013
↑ "Pele's list of the greatest"၊ BBC Sport၊4March 2004။ 19 June 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Strikers' trademark goals: the Thierry Henry control-and-place, the Romario toe-poke and more". The Telegraph. Retrieved5December 2013
↑ Romario: From football rebel to politician။ BBC (15 May 2013)။ 23 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Romário de Souza Faria – Goals in International Matches". RSSSF. Retrieved 19 June 2014
↑ "Best Goalscorers All-Time (Official Matches)". RSSSF Archive. 25 September 2013.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရိုမာရီယို&oldid=525283" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၂၀၊ ၀၃:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။